Nzvimbo Yekutarisisa / Midziyo | Ota Bunkanomori
9: 00-19: 00 (ese maviri kona kona uye multimedia kona)
Thursday China wechipiri wemwedzi wega wega (kana iri yezororo, Chishanu chinotevera)
Kupera kwegore- uye Zororo reGore Idzva (Zvita 12-Ndira 29)
Nguva yakasarudzika yekurongeka (mukati memazuva manomwe pagore)
Ruzivo nzvimbo yakananga runhare 03-3772-0740
Iyi kona ine basa rakafanana neOta Ward Library, ine mabhuku, magazini, maCD, uye zvinhu zvine chekuita nenzvimbo.
Maitiro ekukwereta zvinhu kwekutanga
"Ota Ward Raibhurari Yakajairwa Kashidashi Kadhi" inodiwa.
Chero ani anogara muOta Ward kana ane chekuenda kubasa kana chikoro muOta Ward anogona kuchishandisa.
Kunyoresa, iwe unozobvunzwa kuratidza chitupa (rezinesi rekutyaira, kiredhiti yeinishuwarenzi kadhi, kadhi ID yemudzidzi, nezvimwewo) rine zita rako nekero kuti uone kuzivikanwa kwako.
Vaya vakatozviita kuOta Ward Library vanogona zvakare kuishandisa muhotera.
Nhamba yezvikwereti: Kusvika pamabhuku gumi nemaviri, magazini, mapikicha-enhau. Kusvika kumaCD matanhatu.
Kukweretesa nguva: kusvika kumavhiki maviri
Nhamba yezvigaro zvakaonekwa
Pepanhau / kona yemagazini
34 zvigaro (zvinosanganisira zvigaro zvishanu zvekutanga zvePC uye zvigaro gumi nemimwe zvinogoneswa nePC)
Nezve kudzosa zvinhu kana iyo museum yakavharwa
Ndokumbirawo ushandise iyo "return post".
* Ndokumbirawo udzore izvo zvinhu zvakarairwa kubva kuraibhurari iri kunze kwewadi zvakananga kuhwindo reraibhurari yekurendesa.
Kana iwe uchida kutsvaga zvekushandisa, ndapota shandisa iyo komputa terminal kune mushandisi.
Kana iwe uine chero mibvunzo, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu sezvo isu tichigona kukubatsira iwe.
Kana iwe usina zvinhu zvaunoda, unogona kugadzira kana kuodha kubva kuraibhurari yewadi.
Unogona kutsvaga nekuchengetedza zvinhu uye kutarisa ruzivo rwevanhu paInternet.
Kuti uwane mamwe mashokoPeji reOta Ward Library Ndokumbira utarise kune iyo.
Iwe unogona kuona zviitiko zvekugadzira senge zvekupenga komputa mashandiro, kugadzira zvinyorwa, iyo Internet, graphic kugadzirwa, uye pikicha / vhidhiyo kugadzirisa.
Ndokumbirawo zadza fomu rekunyorera uye wopa iyo "Ota Ward Library Yakajairika Kadhi" kunzvimbo yekugamuchira.Vakananga vateereri vanogumira kune vadzidzi vekutanga chikoro uye pamusoro
Kona yega yega
Chiitiko chekona (14 mota)
Iwe unogona kuona kwekutanga komputa mashandiro, hofisi software senge Izwi neExcel, uye kudzidza software yakadai seGo / Shogi uye typing software.
1 awa mahara.Unogona kuenderera nekuishandisa kana iri yemahara.
Internet kona (6 zvikamu)
Iwe unogona kuona kubhurawuza peji reimba.
Ruzivo senge kutumira maemail uye kutumira paSNS hakugone kutumirwa.
Iwo maminetsi makumi matatu ekutanga mahara, uye iyo yasara maminetsi makumi matatu ichave yekuwedzera zana yen.
Rokugadzira chiitiko chekona (2 zvikamu)
Uine maratidziro ematumba eWin uye Mac yega yega, unogona kuita zviitiko zvekugadzira senge kugadzirwa kwemifananidzo uye kugadzirisa mufananidzo / mufananidzo.Izwi, Excel, Photoshop uye Illustrator zvinounzwa.
Ichave yen yen mazana maviri mumaawa maviri.
Unogona kuidhinda. (A4: Monochrome 10 yen, Ruvara 30 yen)
USB ndangariro inogona kushandiswa. (Ndokumbirawo uve nehutachiona scan pamabiko usati washandisa)
Iko hakuna murayiridzi wekutsanangura mashandiro. (Ndokumbirawo ushandise chinyorwa chakapihwa)
Iyo yakagadzirirwa kuitira chinangwa chekupa iyo internet yekubatanidza sevhisi kutsigira kutsvagurudza nekudzidza kune avo vanoshandisa iyo ruzivo nzvimbo.
Iyi Wi-Fi inowanikwa panguva yekuvhura kwemaawa ekona yeraibhurari uye kona yemultimedia.
Kana iwe uine chinongedzo chekutaurirana chinogona kubatanidza kune isina waya LAN, unogona kuishandisa mahara.
Chenjedzo maererano nekushandisa
Kuti ushandise sevhisi, iwe unofanirwa kubvumirana kune zviga zvebasa reJapan rakabatana mahara Wi-Fi.
Wi-Fi haina kunyorerwa zvisina waya kuitira kuti ugone kuishandisa nyore. Ndokumbirawo ushandise sevhisi panjodzi yako wega, sekusapinda nhoroondo yemunhu yakadai seID, password, kiredhiti kadhi, nezvimwe.
Iyo sevhisi inogona kunge isingawanikwe nekuda kwekugadzirisa michina, nezvimwe.
Paunenge uchishandisa sevhisi, hotera haizobatwe nemhosva yekukuvara kune mushandisi kana kunetseka nevechitatu mapato.